Adams – बाह्रथरी कुरा
प्राविधिक निर्देशक : १२ थरीका मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति यिनै हुन्। १२ थरीका सम्पादकदेखि टिप्पणिकारसम्मको नामाकरण गर्नेदेखि साइटको प्राविधिक काम सबै यिनको जिम्मामा छ। सुन्नमा आएअनुसार यिनी पनि कडा आलोचक हुन् रे। बेलाबेला कडा टिप्पणि पनि गर्छन् तर धेरैपय बेला चुपचाप कुरा सुन्ने र अन्त्यमा आफ्नो राय प्रस्तुत गरेर सो रायमा सबैको सहमति लिन यी सिपालु मानिन्छन्। १२ थरीका वरिष्ठ टिप्पणिकारहरुलाई यिनले पछाडिबाट भुक भुक लात्ताले हान्छन् र भन्छन्, ‘लागेन नि? लागेको भए बाल हो ।’
Continue Reading “भोट चैं… सुर्जेमै है ☀️☀️☀️” →
May 1, 2017 By Adams राजनिती एमाले, के पी ओली, चुनाव, माओवादी, सुर्य2 Comments
फेसबुकमा मेरा कैयौं यस्ता साथीहरुसँग जम्काभेट भएको छ जोसँग वास्तविक जीवनमा एकपटक पनि दोहोरो कुरा भएको छैन। एउटै भोजमा सँगै भेटियो र मलाई गला लागेर हिक हिक हुदाँ पनि उसले मलाई पानी दिँदैन तर पनि उसले मलाई फ्रेण्ड रिक्वेष्ट पठाएको हुन्छ। अब भन्नोस्, म किन उसलाई मेरो साथीभाइ इस्टमित्र भएको फेसबुकमा भित्र्याउने ? मलाई कसले के भन्छ (कस्तो सम्बोधन गर्छ ), म कहाँ जान्छु (कहाँ गएको फोटो अपलोड गर्छु ), कोसित हिँड्छु (मेरो फोटोमा कसलाई ट्याग गर्छु ) यो सब खोजीनीति उसलाई किन दिने? तपाइँलाई दिन मन लाग्छ त दिनोस्। परिवार भित्र पनि के कुरो अमिल्दो लाग्छ भने- बाले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाम्चन् । बा, ससुरा वा मामा साथी कसरी बनुँ म ? Continue Reading “फेसबुकका १२/२७ कुरा” →
March 9, 2016 By Adams सामाजिक सञ्जाल फेसबुक10 Comments